Liiska Todoba Ciyaartoy Oo Ay Coutinho & Ozil Ka Mid Yihiin Oo Barcelona Lala Xidhiidhinayo, Soo Laabashada Ousmane Demeble Iyo Isbadalo Camp Nou Laga Samayn Doono. | Saxil News Network
Liiska Todoba Ciyaartoy Oo Ay Coutinho & Ozil Ka Mid Yihiin Oo Barcelona Lala Xidhiidhinayo, Soo Laabashada Ousmane Demeble Iyo Isbadalo Camp Nou Laga Samayn Doono.
Barcelona ayaa hadda fasax uu kala dirtay ciyaartoyda kooxdeeda kowaad kadib guushii ay ka soo gaadheen Santiago Bernabeu ee kulankii El Clasico-da waxayna soo qaadanayaan maalmaha fasaxa ciid gaaleeda Chrismas oo inta badan horyaalka La Liga fasax la galo. Laakiin Barcelona ayaa bisha January samayn doonta isbadalo muhiim u noqon doona Valverde si uu ugu tartamo koobabka ay kooxdiisu qaybta ka tahay oo dhan.
Wargayska Marca ayaa soo bandhigay isbadalada ay Barcelona samayn doonto bisha January iyada oo ay isbadaladu ka iman doonaan saxiixyo cusub oo ay maamulka Camp Nou doonayaan, xidigo dhaawacyo ka soo laaban doona iyo waliba ciyaartoy aan safka Barca muhiim ka ahayn oo lacag laga samayn karo.
Ugu horayn Ousmane Dembele iyo Rafinha ayaa sida ugu dhakhsaha badan ugu soo laaban doona kooxda kowaad kadib markii ay ku maqnaayeen dhaawacyo waqti badan qaatay, waxayna labadan xidig fursad wayn siin doonaan Ernesto Valverde oo ku soo tiirsanaa hal abuurka Andres Iniesta iyo Lionel Messi isaga oo heli doono doorashooyin kale oo muhiim u ah.
Mar labaadka Barcelona ayaa doonaysa in ay samayso saxiixyo waxaana jira todoba ciyaartoy oo lala xidhiidhinayo Balaugrana inkasta oo ayna suurtogal ahayn in ay la soo wada saxiixato balse waxay u yihiin doorashooyin haddii ay qaar waydo in ay kuwa kale raadsan karto.
Philippe Coutinho ayaa ah bartilmaameed wayn oo ay Barcelona lahayd tan iyo xagaagii mana aha bartilmaameed ay maamulka Camp Nou qarsoodi ka dhigteen, laakiin waxaa marka uu dhawaan suuqu furmo la arki doonaa haddii ay Liverpool isbadal ka samayso halkii adkayd ee ay suuqii xagaagii iska taagtay bixitaanka xidiga ree Brazil.
Waxa kale oo xidigaha la xaqiijiyay in ay Barcelona doonayso ka mid ah Mesut Ozil, Nabil Fekir, Max Meyer, Leon Goretzka , Aleksandr Golovin iyo waliba xidiga kooxda Atletico Madrid ay Barcelona ugu cadhootay ee ay FIFA uga dacwootay ee Antoine Griezmann.
Laakiin waxaa sidoo kale jira xidig ay Barcelona muhiimad wayn siinayso oo ka tirsan kooxda Gremio ee dhawaan Real madrid la ciyaartay koobka kooxaha aduunka oo la yidhaa Arthur kaas oo la sheegay in uu noqon karo badalka tooska ah ee Iniesta. Arthur ayaa lagu tilmaamaa ciyaartoy leh DNA-da Barcelona waxaana dhawaan soo baxay sawiro uu xidhan yahay maaliyada Barca.
Isbadalada kale ee ay Barcelona bisha inagu soo aadan samayn doonto waxaa ka mid ah in Arda Turan ay u raadin doonto koox gacmaheeda ka saartay kadib markii uu hal maalin ka soo muuqan waayay liiska Valverde iska dhaaf in uu ciyaaro ama kaydka lagu qoree.
Javier Mascherano ayaa go’aan ku gaadhay in uu soo dhamaaday waqtigiisii Camp Nou waxaana si wayn loola xidhiidhinayaa kooxda ree China ee Hebei China Fortune, wuxuuna ka mid noqon karaa isbadalada dhawaan ka dhici doona Barca. Saamaynta layaabka leh ee uu Thomas Vermaelen la soo baxay ayaa sabab u noqon karta in maamulka Barca ay ugu danbayn Mascherano u fasaxaan in uu bixi karo.
Gerard Deulofeu oo xagaagii dhawaa ku soo laabtay Barcelona ayaa ku dhibtoonaya sidii uu fursad u heli lahaa laakiin Aleix Vidal ayaa markaasta oo uu fursad helo samaynaya wax qabad fiican taas oo Valverde ku qasbi karta in uu kooxda ku sii haysto maadaama oo uu difaac iyo garabka weerarka ka ciyaari karo.